आलुको बोक्रालाई यति गरे असाध्यै फाइदा गर्छ स्वास्थ्यमा, के तपाईलाई थाहा छ ? - ज्ञानविज्ञान
कार्बोहाईड्रेटको सबैभन्दा उत्तम स्रोतको रुपमा आलुलाई लिइन्छ । आलुमा पर्याप्त मात्रामा कार्बोहाइड्रेट पाईन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर,आलुमा कार्बोहाइड्रेट मात्रै पाइदैन यसमा मानव शरीरका लागि आवश्यक अन्य तत्वहरू पनि प्रशस्त पाइन्छ । धेरै मानिसमा आलु खाए मोटाइन्छ भन्ने एक प्रकारको भ्रम छ । वास्तविकता भने अलि फरक छ । आलुमात्रै होइन जुनसुकै कुरा पनि धेरै खाए स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
आलु बहूउपयोगि कन्दमूल मानिन्छ । तरकारीको प्रमुख नै मानिने आलु विश्वभरि सबैभन्दा बढी उपयोग गरिन्छ। आलुलाई सदाबहार तरकारीमै मात्र दर्जा प्राप्त छैन। यसमा विलक्षण औषधिय गुणसमेत छ ।
समथर मैदानी भूभागदेखि चिसो पहाडसम्म एकछत्र उत्पादन हुन्छ आलु । अफ्रिकादेखि एसिया अनि युरोपदेखि अमेरिकासम्म आलु उत्पादन नहुने कुनै क्षेत्र नै बाँकी छैन। आलुको उत्पत्ति दुई हजार वर्षभन्दा पहिला सर्वप्रथम दक्षिण अमेरिकाको पेरुमा भएको कुरो वैज्ञानिक बताउँछन्। त्यसपछि सत्रौं शताब्दीमा स्पेनका नाविकले पेरु जितेपछि आलुलाई स्पेनमा ल्याएको देखिन्छ भने सन् १५८०मा कोलम्बसले स्पेनबाट युरोप लगिएको पाइन्छ ।
युरोपको जर्मनी, अष्ट्रिया, फ्रान्स, पोर्चुगल आदि देशमा फैलिन करिब दुई सय वर्ष लागेको आलुलाई पोर्चुगलीले भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश गराएको जानकारी इतिहासमा पाइन्छ। तर हिन्दूको प्राचीन ग्रन्थ वेदमा एवं आयुर्वेदिक ग्रन्थ चरकसंहितामा पनि आलुकै र आलु एउटै देखिएकोले हाम्रो यहाँ आलुको उपस्थिति त्यो भन्दा निकै पहिले नै भइसकेको देखिन्छ ।
आलुको बोक्रा नफाल्नुहोस्,
नेपालमा अधिकांशले आलुको बोक्रा नतासी पखालेर पकाउने गर्छन्, तर कतिपय भान्छामा सबैभन्दा पोषिलो आलुको बोक्रालाई नङ्ग्याएर त्यसको अस्तित्व लुटिने गरिन्छ। विशेष गरी, विवाह-व्रतबन्ध जस्ता पार्टीसमारोहमा यस्तो भूल गरिन्छ, जसको कारण आलुको स्वाद महत्वपूर्ण स्तरले गिरेको भेट्न सकिन्छ।
धेरैले बेवास्ता गर्ने आलुको बोक्रा किन फाल्नुहुँदैन त ? यस्ता छन् कारणहरू
आलुमा हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक पर्ने भिटामिन तथा खनीज पदार्थहरू पाइन्छन्।
कपाल झर्ने, नबढ्ने अनि फुस्रो हुने समस्याले सताएको छ भने आलुको बोक्रा लगा उनुहोस निकै फाईदा गर्छ ।
तपाईँलाई थाह छ कि छैन ? फलफुल, तरकारीका बोक्रामा भरिपूर्ण पोषण हुने हुँदा बोक्रा सहित खानु लाभदायी हुने विज्ञहरु बताउछन् । यो कुरा हाम्रो भान्छामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने चीज आलुमा पनि प्रयोग हुन्छ । अत आलुमा के के फाइदा हुँदा रहेछन् हेरौँ है त :
१. यदि तपाईँ उच्च रक्तचापबाट पिडीत हुनुहुन्छ भने आजैबाट आलुको बोक्रा ताछ्न बन्द गर्नुस् । आलुको बोक्रामा हुने पोटासियमले रक्तनलीको भित्तालाई आराम दिइ रक्तचाप घटाउन मद्धत गर्छ ।
२. रक्तचापको लागि मात्रै नभइ यसमा पाइने पोटासियमले मेटाबोलिजम रेट राम्रो राख्न पनि मद्धत गर्छ । त्यसैगरी मांसपेशी खुम्चिने, तन्किने कार्य र स्नायु कोषको कामको लागि पनि पोटासियम महत्वपूर्ण हुन्छ ।
३. आइरनको कमीले हुने एनिमिया ( रक्तअल्पता) ठिक गर्न पनि आलुको बोक्रा नताछि खाने गर्नुस्, किनभने आलुको बोक्रामा प्रसस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ ।
४. आलुको बोक्रामा पाइने अर्को महत्वपूर्ण तत्व नियासिन(भिटामिन B3) हो । नियासिनले शरीरको कार्बोहाइड्रेटलाई शक्तिमा परिणत गर्न मद्धत गर्छ । यतिमात्र नभई नयाँ कोष बन्न र सुरक्ष गर्न पनि नियासिन जरुरी हुन्छ ।
५. आलुको बोक्रामा प्रसस्त मात्रामा फाइबर हुन्छ । यसले कोलेस्टेरोल घटाउन मद्धत गर्छ । कब्जियत दुर गर्न, कोलोन क्यान्सर हुन नदिन मद्धत गर्छ ।
६. खानुको अलावा आलुको बोक्रालाई अन्य रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आलुको बोक्राबाट रस निकाली त्यसलाई शरीरको कालो धब्बाहरुमा लगाउनाले छालामा चमक ल्याउन मद्धत गर्छ ।
७.आँखा फुल्ने तथा आँखामा हुने डार्क सर्कल ( कालो धब्बा) हटाउन आलुको बोक्रा फाइदा जनक हुन्छ । यसका लागिआलुको बोक्रा छिलेर त्यसलाई आँखाको वरीपरि लगाउन सकिन्छ ।
८. आलुको ब्रोक्राले टाउकोमा मालिस गर्नाले कपाल नभएको भागमा पनि रौ उमार्न मद्धत मिल्छ ।
आलुको बोक्रा हाम्रो स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैका लागि केहि फाइदाहरु छ
आलु खानुको फाइदा
३. बलियो मांसपेशिहरुका लागि आलुको सेवन गर्ने गरिन्छ । व्यायाम पछि कार्बोहाइड्रेटले शरीरलाई सबै भन्दा पहिले ऊर्जा दिने काम गर्छ र आलू कार्बोहाइड्रेटको उत्तम स्रोत हो । आलुको सेवनले मांसपेशिहरु बलियो हुन्छ ।
आलु जति लाभदायक छ त्यति नै यसको बोक्रा पनि हाम्रो स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तरकारी र अचारमा अत्याधिक प्रयोग हुने आलुलाई उसिनेर वा पोलेर खान सकिन्छ । मकै, चामल र गहुँ पछि आलु विश्वमै सबैभन्दा बढी खाईने परिकार हो । चप, पकौडा, समोसादेखि अन्य खाजाका परिकारमा पनि आलुको प्रयोग हुन्छ । तर आलुको जति महत्व छ, त्यसको बोक्रालाई महत्व दिएको पाइदैन । त्यसैले हामी आलुको बोक्रा फालेर परिकार बनाउने गछौं ।
आलु खानुका फाइदा,आलुको बोक्रा हाम्रो स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैका लागि केहि फाइदाहरु र आलुका थुप्रै औषधीय प्रयोग समेत छन् यस मध्ये केहि जानकारीहरु तपाइहरुलाई कस्तो लाग्यो । राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्दिनु होला ।
Don't Miss it जीवन उपयाेगी १२ प्रेरक भनाइहरू
Up Next अन्डालाइ यसरी खानु बढी स्वास्थ्यकर मानिन्छ, जान्नुहाेस्
मानिसको निदाएको बेलामै मृतु हुने निम्न कारण हुन सक्छन्
१‍. उमेर : ४० वर्षभन्दा माथिका यसको चपेटामा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। २. गर्धनको आकार : १७ इन्चभन्दा बढी मोटो…